Madzimai kusvirwa nemukomana wekuZesa - Vanoda Zvinhu
Ma.. Ma.. Makadii zvenyu mkwasha,i was stammering ndabatwa ndisina kupfeka nemukomana wekuZESA.
Taiva wo a young couple tichigara mumayard umu ,murume wangu ari gardener payard pataigara so what happened on this day was kwanga kusina magetsi sezvo yaiva nguva yekunaya so mafaults aiwanda . ndapedza kubika hangu nemoto and i thought i should go take a shower semudzimai wanhasi handingagari ndichinhuwa utsi murume aripo ka .
Ndini uyo mushower ndichiimbirira hangu , sezvo pamba taiswera hedu tiri vaviri nemurume wangu ana boss vaenda kubasa ndakangobuda ndakadaro ndiri musvo ndakabata drying towel rangu ndichitozvipukuta kumeso uku ndichisanofamba kudzokera mumba,ko ndaityeyi hangu muyard mune dura wall plus munongoziva wo kuti dzimba dzema boisky mabathroom netoilet zviri panze.
Pandiri kuno pedza kuzvipukuta kumeso dhuma dhuma nemurume akapfeka work suit yakanzi zesa ndakarohwa nehana kani ndakaerekana ndoti mamukasei nepo aiva masikati ,ndopandakazoti makadii zvenyu ndichindandama ,obvious africa yose yanga yaonekwa , kuti ndichadzokera kubathroom it was too late plus ndinenge ndapira murume uya shure yese kuti aone kadrying towel hakaimbokwana kundivhara muviri vese kuti ndivhare pabeche apa mazamu nemagaro zvosara zviripachena ,kuti ndifambe ndipinde mumba zvaisamboita kani murume uya oona nyama dzangu dzichindengendeka ndichifamba .
Ivo baba vaya kana kutsukunyuka havo rambe vakamira vakangonditarisa ,ndakashaya kana step ,dai pasi paivhurika ndaipinda hangu. Ko murume wangu akandiona ndakamira pano ndisina kupfeka baba vekuzesa vakanditarisa kudai ndinozvitaura ndichitiiko. Ndakazongorovera moyo padombo ndikati mukwasha fambai henyu muende kwamuri kuenda ndiri kuda kupfuura ,iye akatoita kakuvhundukira achidaira achifamba hake kunotarisa wire dzemagetsi kuti dzakamira zvakanaka here. Ini ndakasara ndopesuka ndakananga mumba.
Kutaura idi ndakazvinyarirwa ,ndakadongorera baba vaya nepa window kuti ndione kuti vaenda here wanike varikutogadzira gadzira havo pamberi pebrugwa ravo,vachitendeuka kudai ndokuona aikaka baba varikutogadzirisa mboro yavo yenge yamira kuti isaoneke, ndakatoyeverwa nazvo hangu ndakamira pawindow paya ndakuto imaginer maoko avo akazara tsinga dzakati tarrrrr achindimbanya mbanya muviri vangu semunhu aiva nenzara yebonde handairega kufunga kusvirwa kani.
Murume wangu aiva muporofita wechipostori saka chakandipa zemo rakanyanya nechekuti ndakapedza mazuva angu mashanu ekumwedzi musi wandapedzisa ndichitiwo ndochisvirwa wanike amuporofita vari pamunamato wema 12 days vachitsanya saka hazvayiita kuti tivake bonde mazuva aya kusvika mazuva twelve akwana . Ndokuzouya kwakaita baba vekuzesa ndikabatwa nemuyedzo wandakakundikana kukunda. Sezvo ndaiva ndakamira pawindow paye fantasizing ndichisvirwa handina kuona kuti baba vaye vazviona kuti ndakavadongorera ,ndakazongobva zve pawindow paye ndava kusvoda zvikuru.
Ndakatanga kuzora mafuta angu ndikanzwa kuvhurwa kwemusiwo nekuvharwa kwavo handina kuvhunduka ndichiti zvimwe murume wangu asi vaiva baba vaye vekuzesa vakasvikobata magaro angu zvekuti ndakamerera soo ,ko ropa rechirume ndenge ndichariziva. Ndakambotenser ndakadaro kani ndichiteerera kupuruzirwa ndakazoita kakuvhundukira ndichiti kuna baba vaye ko imi munoiteyi ko murume wangu akapinda muno,iye kwakutoti mustye kani sister ndasiya murume wenyu kunze kwegate achitsvaira marara ndiye anditi ndipinde nditarise tambo dzemagetsi. Ngatingoite zvinopedza nzara , ndakundikana kuzvibata pandakuonai musina kupfeka .
Miromo yakanamana paye tichifemera padenga ndakatonzwa precum kuyerera muzvidya umu semunhu agarisa ndaikwizira chibhinz changu nepamberi petrouse ravo apa ,beche richiita kuvhita vhita mukati mebeche umu muchisosona kunzwa kuda kukwenywa nemboro ndakangodzikisa maoko and reached kunovhura trouse rababa vaya nekuridzikisa nekiuburitsa mboro mubrief ,it was so warm and firm,pulsating ndakangoifongorera so he culd enter i could wait anymore.
Moziva nekudziya kwayo ichingopinda kudai pagspot yepaentrence apa ndakabvunda kani kuita kumerera,tuweti tuchiti tsaa tsaa tuchinoyerera Negumbo,vakatanga kundipomba nayo mboro nekumashure vachiti kana vakuda kutunda vomboiburitsa votanga kupuruzira kabhinzi uku ndichingotunda ,vombopinza mboro kudai ndaibva ndaita kuridzirira kamhere . mbori yainaka mhani iyi ,ko vanhu zvavanongositi heee mboro hombe ndodzinonaka chete ko ichi chakaita chipfupi chakafutirira inga chiri kuzipa wani.
Chinhu chinonzi mboro ndakanzwa kuda kuita sunga ukama nacho kani kunzwa kunatsoti dai zvaramba zvakadai ,dai mboro yacho yaigara hayo iri mumukati umu taingofamba yedu nekugara tichikoira . thats why zvichinzi a woman who orgasms is a happy woman sure ,i really felt complete.
Baba vaya vakadzvova vachitunda vari kuseri kwangu ende ndopakatanga kushanda pfungwa manje kuti ndarara witha stranger ko kana aine chirwere or an sti,ko kumasowe ndikabatwa kuti ndaita hupombwe ,ko ndikaita nhumbu apa ndanga ndambosiya kumwa ndichiti ndozomwa kana murume wangu akupedza matwelve days ake ?
Hongu ndanga ndanakirwa hangu asi zvinonzi yadeuka yadeuka.
Madzimai kusvirwa nemukomana wekuZesa appeared first on Vanodazvinhu.com
Updated: June 13, 2021 — 8:43 pm